Archive du 20170526
Fanilikilihana ny Ben�ny tan�na Aza mifanindritsindry, hoy i Dada
Manana andraikitra ato amin�ny kaominina aho amin�ny maha mpanolotsain�ny Ben�ny tan�na ahy, hoy i Marc Ravalomanana ny alarobia lasa teo.
Fanesorana ny praiminisitra Mampiady ny ao an-dapa
Mivoaka ny feo avy any an-dapa amin�izao fotoana izao fa mifanditra sy tsy mitovy hevitra intsony ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina sy ny filoha nasionalin�ny antoko HVM Rivo Rakotovao manoloana ny hanoloana ny praiminisitra.
Kely finoana amin�ny hisian�ny fifidianana ny taona 2018 ny AKFM (Antokon�ny Kongresin�ny Fahaleovantenan�i Madagasikara).
Governemanta iaraha-mitantana Manome fampitandremana tapa-bolana ny DFP
Vory lanona tetsy amin�ny Panorama Andrainarivo avokoa ny alarobia teo ny ankamaroan�ireo hery politika eto amin�ny firenena taorian�ny antso avo nataon-dry zareo avy anivon�ilay vovonana dinika ho fanavotam-pirenena (DFP)
Taratasin�I Jean Nidiran-doza !
Fa dia inona loatra ry Jean no ozona mihatra amintsika no tonga amin�izao zava-misy izao ? Sa izahay mihitsy no nidiran-doza ka nahatonga anao ho tafapetraka eo amin�io toeranao io ?
Vely kanota ho an�i Rolly Mercia �Mianara aloha lal�na�, hoy ny filohan�ny SMM
Nangina na koa nampanginina ny raharaha mahasaringotra ny loholona Riana Andriamandavy VII izay mifanindran-dalana amin�ny raharaha Claudine Razaimamonjy, ka nitondra ny heviny momba izany indray ny filohan�ny Sendikan�ny Mpitsara eto Madagasikara Faniry Ernaivo ny alarobia teo.
Traboina teny Anosibe Nampiasa herinanatra tsy ara-dal�na
Nitondra fanampiana voatsirambin�ny tanana ho an�ireo traboina vokatry ny hain-trano teny Anosibe niseho ny alahady teo ny fiadidiana ny tan�nan�Antananarivo notarihan�ny delegen�ny boriborintany faha-4 Ramahandrimanana Solofoniaina Daniel omaly.
Rajaonarimampianina mivady Nanova fomba fiady
Miezaka miseho sy miteny isan�andro indray ny filoha Hery Rajaonarimampianina tato anatin�ny herinandro izao. Mialoha io dia efa natomboka ilay fandaharana fanazavan-kevitra � Fotoam-bita � izay ny filoha mihitsy no miresaka sy manazava ny vaovao mafampana ao.
Fankalazana ny fetin�ny reny Hizara voninkazo ny �Ceinture verte�
Etsy amin�ny tranombokim-pirenena etsy Ampefiloha etsy amin�izao fotoana izao ka hatramin�ny alarobia teo ry zareo mpikambana eo anivon�ny Ceinture verte izay ivondronana mpikirakira voninkazo 20 mianadahy eo ho eo.
Niova fomba fiteny sy fomba firesaka indray ny mpitondra fanjakana tato ho ato.
ITM 2017 Mpiara-miombon�antoka akaiky aminy ny BNI
Banky iray miezaka hatrany ny manatsara ny sehatry ny fizahantany eto amintsika ny BNI Madagascar.
La Grande Braderie de Madagascar Hentitra ny fanaraha-maso ny vidin�entana
Fahombiazana sahady ny andro voalohany sy faharoa ho an�ilay hetsika La grande braderie de Madagascar andiany faharoa amin�ity taona ity nokarakarain�ny Madavision.
Scoop digital sy Fan�dio Hanohana sekoly sy fiangonana ary fikambanana
Hiroso amin�ny asa sosialy ao anatin�ilay lohahevitra �Soa ifampizarana� ny tranompamokarana Scoop digital sy ny FAN�dio izay hivondronan�ireo mpilalao sy mpankafy sary mihetsika manomboka izao. Amin�ny alalan�ny fanampiana ireo sekoly,